“Eto Izahay Manohana Anao”: Holandey Mandray Mpitsoa-ponenana · Global Voices teny Malagasy
Vakio amin'ny teny Español, Français, Svenska, Italiano, Nederlands, polski, Română , čeština , Deutsch, Ελληνικά, English
“Tonga soa. Eto Izahay Hanohana Anao.” Holandey mpilatsaka an-tsitrapo mandray mpitsoa-ponenanana ao amin'ny sehatra ao amin'ny gara afovoan'i Amsterdam. SARIPIKA: Faten Busheri
Tamin'ny fialàna amin'ny fiaran-dalamby avy any Paris nankao amin'ny gara afovoany ao Amsterdam tokotokony ho tamin'ny 10 ora alina, dia mahita olona eo amin'ny sehatra aho mitazona ny famantarana izay mivaky hoe: “Tonga soa. Tonga eto izahay mba hanohana anareo”.
Nijanona aho ary nilaza taminy fa nahare aho hoe mila olona miteny Arabo izy ireo mba hanampy amin'ny fandikan-teny ho an'ny mpitsoa-ponenana avy any Afovoany-Atsinanana. Nitondra ahy tao amin'ny zoron'ny gara izay ahitana sakafo, zava-pisotro, fitafiana, kilalao sy filàna fototra hafa voalamina tsara izy, miandry ny fahatongavan'ny mpitsoa-ponenana.
Monina ao Amsterdam nandritra ny roa volana aho, ary taty aoriana niresaka ny mety ho fahatongavan'ny mpitsoa-ponenana izay nahitam-pitomboana ao an-tanàna. Eo ampitsinjovana fa mety hiparitaka ao Holandy ny fanampiana, nitambatra ny vondrona mpilatsaka an-tsitrapo mba hanampy ny mpitsoa-ponenana amin'ny fiampitàn'izy ireo sy hifindra any amin'ny toby.
Manana fandaminana amin'ny ora fahatongavana ny vondrona ao amin'ny Gara Afovoany, mifantoka amin'ireo fiaran-dalamby avy any Frantsa, Alemaina sy Belzika izay azo antoka fa mety mitondra ireo mpitsoa-ponenana ao anatiny.
Tsotra ny asako: mandray azy ireo, mikarajia amin'izy ireo; manontany raha mila sakafo, rano na akanjo izy ireo; mampifaly ny ankizy; manazava izay zavatra hitranga manaraka. Mifantoka amin'izay zavatra tokony lazaiko sy vaovao tsy tokony adinoiko aho. Ny tsy nampoiziko dia ireo tantara tian'ireo mpitsoa-ponenana holazaina amiko.
Tonga tsikelikely izy ireo, miaraka amin'ny tsikitsiky amin'ny endrika falifaly sy mahatsiaro maivamaivana fa tonga ihany izy ireo, mifampiresaka mitantara ny fomba niakaran'izy ireo tao anatin'ny “sambon'ny fahafatesana” tao Torkia mba hipaka ao Gresy ary avy eo ao Holandy .
Khalid, lehilahy 30 taona nilaza tamiko momba ilay sambo azo ambotsina nandehanany niaraka tamin'ny olona 49 tao anatiny, ahitana zaza amam-behivavy. Satria hipoka olona ny sambo ary tsy novononina hitondra izany havesarana be izany, voatery nanipy ny kitapo sy ny fananan'izy ireo tany an-dranomasina izy ireo mba hamonjena ny ainy. Lena be izy ireo raha nigadona tao an-tseranan-tsambon'i Gresy ao Mytilene ary mangovitra raha nijery azy ireo ny manampahefam-panjakana Grika. Midera manokana ireo mpizaha-tany Holandey sasany izay nanatona azy ireo avy hatrany ary nanome fanampiana azy ireo i Khalid. Tsaroany ny vehivavy iray nandrakotra bodofotsy azy noho izy mangatsiaka sy kotsa.
Mpitsoa-ponenana ao Gara Afovoany ao Amsterdam miandry ny hamindrana azy ireo any amin'ny toby vonjimaika. Saripika: Faten Busheri
“Nihakivy izahay tao anatin'ny sambo,” hoy i Khalid tamiko. “Saingy nifankahery. Nitabataba ny lehilahy, “Alefa, vitantsika io! Manana zaza amam-behivavy isika ato anaty sambo!” Ary izany no tokony hanohizantsika ny dia.”
Tamin'ny fahatongavana tao Mytilene, nilaza i Khalid fa lalana 50 kilaometatra no nandehan'izy ireo an-tongotra, avy any avaratry ny nosy hatrao atsimo. Nanondro namana iray nihaona taminy tao anaty lakana izy izay nolazainy fa narary nandritra ny andro maromaro rehefa tambony rano nandritra ny fotoana elaela.
Nanapa-dresaka ny vehivavy Syriana iray ary nilaza fa raha ny marina dia nipoaka ny sambon'izy ireo noho ny havesarana. “Raha mahatsiaro ny dianay nahatongavana teto aho, latsa-dranomaso aho,” hoy izy. Tsy maintsy nilomano tamin'ny metatra vitsivitsy farany amoron-dranomasina izy sy ireo mpandeha namany. Nandositra an'i Al Raqqa, izay eo ambanin'ny fifehezan'ny ISIS tanteraka amin'izao fotoana izao izy sy ny zanany kely telo lahy ary ny vadiny.
Vehivavy iray hafa nitantara ny vola naloan'izy ireo nandritra ny dia tao anaty sambo: 1400 euro isan'olona. Fianakaviana iray hafa nandoa vola 4000 izay tsy maintsy nindramin'izy ireo tamin'ny olom-pantany. “Mandoa vola 4000 euro ianao kanefa mety ho faty?” Hoy aho tamin'iray tamin'izy ireo. “Maty ihany koa izahay na tany Syria aza,” hoy izy.
Nihaona tamin'ny lehilahy Irakiana roa avy ao an-tanànan'i Mosul aho, nosamborin'ny ISIS izy ireo saingy afa-nitsoaka ary niala ny firenena. Ny iray dia Jeneraly teo aloha, notànan'ny ISIS nandritra ny 17 andro. Notapahan'izy ireo (ISIS) ny sorony havanana satria nisy tombokatse (fady amin'ny Silamo) ao amin'ny sarintanin'i Iraka, notampenana ny masony ary nofatorana izy. Ny lehilahy faharoa kosa dia i Ahmed, iray amin'ireo olona 23 nosamborin'ny ISIS, nilaza izy fa notsatohan'izy ireo antsy ny tenda. “olona 19 no maty teo imasonay, ary iray amin'ireo tafavoaka velona aho,” hoy i Ahmed tamiko. “Tsy fantatro ny fomba naha-tafavoaka ahy tamin'izany.”
Mpitsoa-ponenana Irakiana roa nahavita nitsoaka rehefa nosamborin'ny ISIS, maka sary miaraka amin'i Joost, mpilatsaka an-tsitrapo Holandey (Ankavia) sy ny mpanoratra (Ankavanana). Saripika: Faten Busheri.
Raha miresaka amin'ny olona amin'ny teny Arabo aho, faly izy ireo maheno ny fiteny mahazatra azy ireo ary manontany ny niaviako. Somary menatra kely aho milaza ny marina fa avy ao Bahrain aho, firenena Helodrano nanampy ny ady ao Syria. Tsy nanome na inona na inona ireo firenena avy ao amin'ny Helodrano ary nanampy ompa amin'ny ratra amin'ny fandosirana andraikitra hampiantrano ny mpitsoa-ponenana ao amin'ny firenen'izy ireo izay manankarena solitany.
Ary eto aho izao, mponina anisan'ny manan-karena ao Holandy, mianatra any amin'ny oniversite ambony mba hahazo Master, fianarana nahazo famatsiam-bola feno. Ny tena ahiahiko dia momba ny fankatoavana ny fanadinako manaraka, rehefa mifanitsa-kitro ao amin'ny zoron'ny gara afovoany izy ireo dia manontany tena amin'izay mety ho hitany rahatrizay kosa.
Nilaza tamiko i Mohammed fa nandao ny vadiny sy ny zanany ao Syria tsy namela na inona na inona saingy nampanantena fa hanorim-ponenana ao Eoropa ary hamonjy azy izy ireo rehefa tafapetraka tsara ao. “Tsy te ho enta-mavesatra ho an'ny fiarahamonina izahay,” hoy izy. “Mpanampy mpitsabo aho. Te hianatra teny Holandey aho ary hiasa.”Manetri-tena izy ireo ka te-hanampy izahay ary mandà tsy handray vola betsaka afa-tsy izay vola kely mahampy azy ireo mandritra ny alina.
Satria faly ireo mpitsoa-ponenana ao amin'ny Gara Afovoany fa tonga ao Amsterdam izy ireo, dia mifaly havanja manodidina anay mpilatsaka an-tsitrapo ny ankizy, mankafy ny kilalao vaovaon'izy ireo. Avy eo, miditra ao anaty fiara fitateram-bahoakan'ny Vokovoko Mena izy ireo izay hitondra azy ireo any amin'ny toby vonjimaika, ary manomboka ny karazana fiainana vaovao.
Raha mila vaovao fanampiny momba ny Mpitsoa-ponenana Raisina ao Amsterdam, tsidiho ny pejy Facebook-n'izy ireo